Media Alliance - सिंहदरबारबाट विदा भए प्रचण्ड
लोकप्रिय समाचार > नेपाल राजनीति > सिंहदरबारबाट विदा भए प्रचण्ड
२२ जेठ, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्रीको रुपमा सिंहदरवारबाट विदा भएका छन् । तर विदाइ हुँदै गर्दा उनले स्वागतका लागि पनि तयार रहन कर्मचारीहरुलाई आग्रह गरे ।
‘संविधानको स्वीकार्यता बढाउने र कार्यान्वयन गर्ने कुरा चुनौतिपूर्ण थियो । धेरै नै अप्ठेरोमा देश जाने हो कि भन्ने कुराहरु थिए । संविधानको स्वीकार्यता पनि बढ्यो र कार्यान्वनको प्रक्रिया पनि दह्रोसँग भयो,’ प्रचण्डले भने, ‘एजेण्डा क्लियर हुनुको कारणले अहिले हामी यहाँनेर आइपुगेका छौं । घुम्दै-घुम्दै गोल हानेजस्तो भाछ ।’ मधेस पहाड हिमाललाई जोडिराख्ने र सबै राजनीतिक शक्तिहरुलाई इङ्गेज गरिराराख्ने कुरामा पनि सफल भएको उनले बताए ।
पहिलेको नौ महिना झिलिमिलीमै बित्यो
२०६४ सालमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा उल्लेखनीय काम गर्न नसके पनि दोस्रो पटकको १० महिने कार्यकाल उपलब्धीमूलक रहेको प्रचण्डको भनाइ थियो । काम गर्ने योजना क्लियर भएकाले आफू सफल भएको उनले बताए ।
‘पहिलेको नौ महिना त झिलिमिलीमै बित्यो । यो दश महिनामा त निश्चित कार्ययोजना बनाएर यो फुलफिल गर्नुछ, पोलिटकल्ली यो गर्नुछ, पार्टीहरुलाई यसरी लानु छ भनेर भिजन क्लियर थियो । छिमेकीहरुलाई सन्तुलनमा राख्नेदेखि, विकासलाई गति दिनेदेखि पोलिटकल युनिटी बनाइराख्ने देखि यी चिजहरु क्लियर थिए ।
उनले अघि भने, ‘म यहाँ प्रवेश गर्दा स्थिति निकै जटिल थियो । यो सरकार किन बनेको होला ? यसले के गर्ला ? भन्ने निकै ठूला प्रश्नहरु थिए । तर नेशनल युनिटी बनाइराख्नको लागि, सबै समुदायलाई पोलिटिकली इङ्गेज बनाउनका लागि १० महिनामा सबैभन्दा ठूलो उपलब्धी मैले त्यो मानेको छु ।’
एसियाली विकास बैंकमा जाने तयारीमा रहेका सुवेदीले भने, ‘कर्मचारीहरु कहिले पनि असुरक्षित तपाईको नेतृत्व हुनुपरेन । अभिभावक सँगै भएजस्तो भयो । तपाईं यहाँ नरहे पनि र्फमल-इन्र्फमल निर्देशनहरु पाइराखौं ।’
मुख्य सचिव सुवेदीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सुनौलो रंगको बुद्धको मूर्ति उपहार दिएका थिए भने सचिवालयका सदस्यहरुलाई पनि ‘टोकन अफ लभ’ दिएका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानमन्त्री कार्यालय परिसरमा वृक्षरोपण पनि गरेका थिए ।